कोरोनाबाट २५७ जनाले ज्यान गुमाए, बिहिबार थपिए देशभर १२२८ जना, संक्रमितको संख्या ४२ हजार ८७७ पुगे — onlinedabali.com
कोरोनाबाट २५७ जनाले ज्यान गुमाए, बिहिबार थपिए देशभर १२२८ जना, संक्रमितको संख्या ४२ हजार ८७७ पुगे
डबली संवाददाता२०७७ भदौं १८ गते
काठमान्डौं । स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेश बिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउने पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६ छन् । तीनिहरु २ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । यससँगै हाल सम्म २५७ जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कोरोना भाइरसका थप १२२८ जना नयाँ संक्रमित थपिएको बताएका छन् । ती मध्ये ८३४ पुरुष र ३९४ महिलामा भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ४२ हजार ८७७ पुगेको छ ।
त्यसैगरी बिहिबार काठमान्डौमा थप ४४३ जनामा कोरोना भाईरस संक्रमण देखिएका छन्। ती मध्ये काठमान्डौ जिल्लमा ३५७ जना, ललितपुरमा ४६ जना र भक्तपुरमा ४२ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जनाएको छन् ।
आज गत २४ घण्टामा गरिएको १३ हजार ४१३ पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । आज ९१७ जना कोरोना भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म २४ हजार २०७ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
हाल देशभर १८ हजार ४१३ सक्रिय संक्रमित छन् । ती मध्ये १० हजार ६७१ जना संस्थागत तथा ७ हजार ७४२ होम आइसोलेसनमा छन् । हालसम्म ८ लाख ३१ हजार ८ सय ५२ पीसीआर परिक्षण भएको मन्त्रालयको नियमित प्रेश ब्रिफिङमा जानकारी दिए ।
त्यस्तै हिजो नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै डा. गौतमले पछिल्लो देशभर ११ सय २० जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका बताएका थिए । तिनीहरु मध्ये ३ सय २० जना महिला र ८ सय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि थिए ।
त्यस्तै गरी हिजो नै काठमाडौं उपत्यकामा थप ३८८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको बताएका थिए । उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा परिक्षण गरिदै आएको छ । हिजो सक्रमित हुने काठमाडौंका ३५० जना, भक्तपुरका ९ जना र ललितपुरका २९ जना भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका थिए ।
हिजो कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप १२ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्ले समय हिसाव गर्ने हो भने नेपालमा प्रतिघण्टा २ जना कोरोनाका कारण ज्यान गईरहेका मन्त्रालयले बताएको छ । हिजो मात्र १११२ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका थिए ।